Margarekha » बिरामीलाई किन दिइन्छ सलाइन पानी ?
बिरामीलाई किन दिइन्छ सलाइन पानी ?
सामान्यतया मुखबाट पानी वा आवश्यक पदार्थ खान नसक्ने अवस्थाका बिरामीलाई सलाइन पानी दिइने गरिन्छ । बाहिरबाट हेर्दा एउटै जस्तो देखिए पनि बिरामीको अवस्था हेरेर विभिन्न किसिमको सलाइन पानी प्रयोग गरिएको हुन्छ ।
सलाइन पानी दुई किसिमको हुन्छ । नर्मल सलाइन र रिगंर ल्याक्टेट । नर्मल सलाइनमा नुन र पानी हुने गर्छ । यसमा ०.९५ प्रतिशत सोडियमक्लोराइड समावेश हुन्छ । त्यस्तै, रिगंर ल्याक्टेटमा थप ल्याक्टेट र पोटासियम राखिएको हुन्छ ।
आममानिसमा सलाइन पानीले तागत दिने भएकाले जति बढी दियो त्यति फाइदाजनक हुने भ्रम पाइन्छ । तर, यसमा सामान्य नुनपानी हुने भएकाले थप तागतिलो वा शक्ति दिने भन्ने हुँदैन ।
शरीरमा पानीको अभाव, अत्यधिक रक्तश्राव भएका बिरामीलाई प्रायः सलाइन पानी दिइन्छ । त्यस्तै, झाडापखाला, अप्रेसनको तयारीमा रहेका र पेट खाली राख्नुपर्ने बिरामीलाई सलाइन पानी आवश्यक हुन्छ । त्यसैगरी, उपचारका क्रममा रगत खेर जाने सम्भावना भएका बिरामीलाई समेत सलाइन पानी चढाइन्छ ।
लगातार नसाबाट औषधि दिनुपर्ने बिरामीलाई सलाइन पानी दिइने गरिन्छ । त्यस्तै, अत्यावश्यक सेवा दिनुपर्ने बिरामीलाई सकेसम्म छिटो रक्तनली खोलेर सलाइन पानी दिनुपर्छ ।
सिकिस्त बिरामीमा नसा खोल्न अप्ठ्यारो हुन सक्ने अवस्था आउँछ । यसरी औषधिले काम गर्न नसक्ने अवस्था आएमा नसाबाट सलाइन पानी दिइन्छ ।
शरीरमा पानीको अभावबाट हुन सक्ने समस्याबाट बचाउन सलाइन पानी आवश्यक हुन्छ । जसले शरीरमा रक्तसञ्चार कायम राखी महत्वपूर्ण अंगहरूलाई हुने हानिबाट जोगाउन मद्दत गर्छ । नयाँपत्रिकाबाट